26. februar 2020 - NorSom News
Tromsø: Qofkii ugu horeeyay ee qaba xanuunka Corona-Virus, oo Norway lagu arkay.
Norsomnews - 26. februar 2020
Dalalkan ayaa Yurub ilaa hada lagu arkay viruska Corona.
Sweden-Denmark: Muuqaal ay Snapchat isaga duubeen caruur soomaali ah oo is tooganeyso.
Qof Norwiiji ah oo laga helay viruska corona.
Shirkad Barnevernka la shaqeyso ayuu lahaa: Wuxuu ku xadgudbay caruur gurigiisa kunool.